Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara GO ihu igwe satellite | Netwọk Mgbasa Ozi
Eleghị anya ị nụla gbasara satịlaịtị na-enyocha mbara igwe na telivishọn. Ha bụ ngwaọrụ nwere nnukwu teknụzụ nke nwere ike inye anyị nnukwu ozi gbasara ihe dị na mbara igwe na ihe na-eme na ụwa anyị. N'okwu a, anyị na-ekwu maka satịlaịtị GARA. Satelite a na-enyere anyị aka ịkọ amụma ihu igwe nke ukwuu. Ma ọ bụ na ịkọ ihu igwe bụ ihe dị mgbagwoju anya. Ọ bụghị ma ọlị ihe nwere ike itinye uche ma ọ bụ na ụfọdụ algọridim ọ na-arụ ọrụ. Maka nke a, amaara na ọtụtụ oge "onye ihu igwe na-ada."
N’isiokwu a, anyị ga-egosi gị ihe mere GOES jiri bụrụ igwe satịlaịtị kachasị mma etinyela n’ime oge niile.
1 Mkpa maka ịkọ ihu igwe
2 Kedu ihe bụ GO?
3 Mma mma na obere amụma njehie
4 Ohere gbasara oghere
Mkpa maka ịkọ ihu igwe
Kọ amụma ihu igwe bụ ihe dị anyị mkpa iji rụọ ọrụ anyị ma ọ bụ ịhazi oge ụfọdụ. Dabere na ọnọdụ ihu igwe, a na-eme ụfọdụ ma ọ bụ na ọ bụghị. Ya mere, imata amụma ihu igwe dị ezigbo mkpa. Otú ọ dị, Ọ bụghị ọrụ dị mfe. Ọ dị oke mgbagwoju anya ebe ọ bụ na mgbanwe nke ikuku nwere ike gbanwee oge niile n'ime awa. Ọ bụ ezie na taa enwere ọtụtụ mmiri ozuzo ngwa na anyị nwere ike ịmata ma ọ bụrụ na echi ọ ga-ezo mmiri n'ógbè anyị, data ndị a nwere ike ịda.
Ma ọ bụ na n'agbanyeghị na amụma ihu igwe na-ada mgbe ụfọdụ, ọ bụ ihe nkịtị. A maara oge na-emetụta ọtụtụ mgbanwe na ihu igwe. Iji nyochaa ihe na-eme na mbara igwe anyị, anyị nwere osisi ọzọ nke satịlaịtị na-enyocha ihu igwe. Satellite ndị a na-elekọta ike mara usoro ikuku nke dị n'oge niile ma nwee ike ịkọ mgbanwe ha.
Emeputara GOES Satellite iji nwee ike ịkọwa ihu igwe n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụghị naanị na ọ na-enye nke ahụ, ọ na-enye ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ GO?
Agaba bu acronym maka Geostationary Operational Gburugburu Ebe Obibi. Satellite a echeela mgbanwe n'etiti Satellites niile nke ụdị a. Enwere Satellites polar orbit na satellites ndị ọzọ nke geostationary orbit. Ndị nke abụọ a bụ ndị orbit ha dabara na ọsọ anyị nwere orbit nke ụwa. Nke a pụtara na ọ na-enye anyị otu ụdị ụwa ahụ. Ọ nwere ike ịnọgide na-efefe ihe ụfọdụ kpọmkwem na mbara ala anyị. Emere nke a etu a n’ihi na ebum n’uche ya bụ inye mgbanwe ọnọdụ ihu igwe iji kwuo mgbanwe ndị a ga-eme.
GOdị GOES-R dị na ajụjụ bụ nke kachasị agbanwe agbanwe kemgbe mmelite ngwa na ikike nhazi data. Ọ nwere ike ịhazi ozi na oke na ọsọ dị ukwuu, si otú a na-enye anyị ọrụ nwere ogo na nkenke karịa. Nke a dị oke mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta nkenke mgbe anyị na-akwadebe akụkọ gbasara amụma ihu igwe na-enweghị ntakịrị ntakịrị mperi.
Ọzọkwa, nwere ohere gbasara ohere dị okpukpu anọ karịa nke nkịtị karịa na ikpuchi okpukpu ise karịa. Ihe ngosi oge nke ọkụ ọkụ ọkụ dị egwu. Nke a na - enyere aka ịba ụba nke amụma nke oke ifufe ma melite oge ị nwere ike ịdọ aka na ntị banyere nguzobe oke ikuku. Nke a zuru oke maka ndị na-amụ oke mmiri ozuzo ma ọ bụ ndị "na-achụso oke mmiri ozuzo." N'aka nke ọzọ, ọ na - enye aka iji meziwanye amụma banyere ajọ ifufe na ike ọ nwere ike, ijikwa ọkụ ọkụ X-ray nke ọma na anyanwụ, wdg.
Mma mma na obere amụma njehie
Ihe enwetara na GOES satellite bụ ịnweta nke ka mma mgbe ị na-enweta data ihu igwe yana oke oke njehie. Ajuju otutu ndi mmadu juo onwe ha mgbe ha na etinye ya na orbit bu ọ bụrụ na anyị nwere amụma ndị na-ada ada karịa nke ndị bu ụzọ. Ọ na-ewute ya n'ezie ịmara na ọ ga-ezo mmiri n'ụdị ụbọchị ahụ, kagbuo atụmatụ maka ya yana n'ikpeazụ na ọ bụ ụbọchị anwụ na-achasi ike karịa mgbe ọ bụla. Ma ọ bụ nke ọzọ, anyị na-apụ maka ị drinkụ ihe ọ andụ andụ wee daa na mberede mmiri ozuzo dị ike.
A na-enweta amụma ihu igwe site na ụdị nke na-eme nnwale nke ihe ga-eme. Iji mepụta nkwekọ ndị a, ọ dị mkpa ịmata ụkpụrụ nke mgbanwe ihu igwe na oge ahụ na omume ha nwere ịgbanwe ụkpụrụ ndị a. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ụkpụrụ nke okpomọkụ, nrụgide nke ikuku na ikuku na-aga n'ihu ịgbanwe dịka ha na-eme ugbu a, anyị nwere ike ịkọwa nguzo nke mmiri ozuzo. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume na ụkpụrụ ndị a gbanwere omume ha maka ụfọdụ mgbanwe ndị ọzọ. Nke a bụ ihe na - eme ka njehie dị mgbe niile.
Maka ụdị ndị a na-asọpụta nke ọma ma nyekwuo data ziri ezi, anyị chọrọ ọbụna data ndị ọzọ ka ị banye n'ime ndị na-agbanwe agbanwe. Ihe data ndị a ziri ezi karị, amụma ka mma satellite na-aga nwere ike ime. Site na ngwá ọrụ ya, satịlaịtị na-ahụ ihe ozugbo, n'adaghị ada ma na-aga n'ihu, ihu ụwa dị n'òtù egwuregwu 16. Ọzọkwa, Ọ na-agụnye ọwa a na-ahụ anya, 4 dị nso na ọwa infrared na n'ihu ọwa 10 infrared. Ikike a nile na - enye gị obere ohere maka ihie ụzọ.
Ohere gbasara oghere
Uru nke satịlaịtị na-agbanwe agbanwe bụ na ọ bụghị naanị na-aenta ntị na ụwa na nchọpụta ihu igwe. O nwekwara ndi ozi ozo na nkwukọrịta si mba ofesi. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ọrụ maka ịma ụdị ohere dị ka nke a ifufe nke anwụ. Ọ na-enyocha ụfọdụ ụzarị ọkụ nke nwere ike imerụ ndị na-agụ mbara igwe na anyị nwere pụọ na ụwa.
Na mgbakwunye na ịtụle ihe egwu dị na mbara igwe, enwere ike iji ozi a dọọ aka na ntị banyere ihe egwu nwere ike ịda. Ya mere, enwere ike izere ụfọdụ mmebi nke nkwukọrịta. Ọ nwere magnetometa nke na-ahụ maka ịlele magnetik na ihe dị ike nke ihe ndị ahụ na-ebu n'èzí.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere GO satellite, nke kachasị mma enwere taa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Amụma » Na-aga na satịlaịtị